DHAGEYSO Wasiirka dowlad wadaajinta oo tageeray afti lagu bedelayo dastuurka – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Wasiirka dowlad wadaajinta oo tageeray afti lagu bedelayo dastuurka
Wasirika wasaaradda dowlad wadaajinta ee dalka Mr. Eugene Wamalwa ayaa sheegay inuu tageersanyahay ololaha uu hor kacayo madaxa xisbiga Thirdway Alliance Dr. Ekuru Aukot ee la doonayo in wax looga bedelo dastuurka.
Mr. Wamalwa ayaa intaasi ku daray in dastuurka hadda wadanka laga isticmaalo la ansaxiyay iyadoo boqolkiba 20 shuruucda ku qeexan aanan lagu qanacsanayn.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in la joogo xiligii la bedeli lahaa qeybahaasi si dhammaan kenyaanka ay boqolkiba boqol ugu wada qancaan shuruucda wadanka u degsan
Dhanka kale xoghayaha guud ee dalladda ay ku mideeysanyihiin ururrada shaqaalaha dalka Mr. Francis Atwoli iyo senetarka Kakamega Cleophas Malaya ayaa soo dhaweeyay olalaha socdo waxayna sheegeen inay si buuxda u taageerayaan.
Ololaha ku aaddan isbedelka la doonayo in lagu sameeyo dastuurka wadanka ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay.
Iyadoo siyaasiyiinta qaar ay tageerayaan hadana madaxda siyaasadeed ee laga soo doortay ismaamulada ay ku noolyihiin xoola dhaqatada sida waqooyi bari ayaa weli ku adkeysanaya inay ka soo horjeedsanayaan hadii uu yahay mid lagu wiiqayo awoodda dhaqaale ee maamul goboleedyada.
← Qaramada midoobay oo sheegtay in 15 qof oo shacab ah lagu dilay Yemen
DHAGEYSO Xuska maalinka halyeeyada oo sannadkan lagu qabanayo Kakamega →
Gudiga amniga Puntland oo amaro amni soo saaray xiliga caleema saarka madaxweynaha. January 23, 2019
Senetarada Maraykanka oo u codeynayo sharciyo lagu soo afjarayo howlaha xannibmay January 23, 2019
In ka badan 300,000 oo arday ah oo aanan ka faaiideysan doonin lacagaha dowladda ay siiso dugsiyada sare January 23, 2019
Wasiirka arrimaha gudaha oo madax looga dhigay mashaariicda dowladda January 23, 2019
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR FM 1.30PM 22/1/2019 January 22, 2019
Madaxweynaha Puntland oo loo kordhiyay mudada uu ku soo magacaabayo xukuumadiisa. January 22, 2019
Safiirka Indonesia ee Soomaaliya oo waraaqihiisa gudbiyay. January 22, 2019
Maamulka Gobolka Banaadir oo burburiyay sharci daro lagu dhistay. January 22, 2019
Suudaan oo ay weli dibadbaxyo ka socdaan January 22, 2019
Gudiga amniga Puntland oo amaro amni soo saaray xiliga caleema saarka madaxweynaha.
Senetarada Maraykanka oo u codeynayo sharciyo lagu soo afjarayo howlaha xannibmay
Wasiirka arrimaha gudaha oo madax looga dhigay mashaariicda dowladda
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR FM 1.30PM 22/1/2019
Maamulka Gobolka Banaadir oo burburiyay sharci daro lagu dhistay.
Suudaan oo ay weli dibadbaxyo ka socdaan